Iwo 8 Akasununguka Mahara Dzimwe nzira kune PowerPoint | Gadget nhau
Dzakanakisa dzimwe nzira dzePowerPoint
Ignatius Room | | Software, Tutorials
Mumakore makumi maviri apfuura, taona mafomati maviri ave muyero mukati meInternet. Kune rimwe divi isu tinowana mafaera ari muPDF fomati, fomati iri parizvino inowirirana inoenderana neese anoshanda masystem pasina kushandisa chero chekunze application kuivhura. Kune rimwe divi, isu tinowana mharidzo mu .pps uye .pptx mafomati. Izvi zvinowirirana zvinoenderana nefaira re gadzira mharidzo kubva kuMicrosoft PowerPoint application.
Kuti uwane mharidzo dzakagadzirwa neichi chishandiso, zvinofanirwa kuve nemuoni anoenderana, zvese zvinoenderana asi zvisingawanikwe natively. Microsoft PowerPoint ndicho chikumbiro chakanakisa chiripo pamusika chekupa mharidzo dzerudzi chero rupi zvarwo, asi chiri chikumbiro icho chakakosha kushandisa hofisi yeOffice 365 kuti ugone kuishandisa. Kana iwe uchitsvaga mamwe maficha ekugadzira mharidzo, saka tinokuratidza izvo zviri izvo nzira dzakanakisa dzePowerPoint.
Pakati pedzimwe nzira dziripo pamusika, tinogona kuwana zvese zvemahara uye zvakabhadharwa sarudzo, saka inogona kunge isiri zano rakaipa kubhadhara kunyorera kweHofisi 365 kana isu tichida kuwana zvakanyatso kubva pazviri kuPowerPoint, kungave kuburikidza nebasa redu remazuva ese kana neyedu nguva yemahara kuti tikwanise kushandura mhedzisiro kuva vhidhiyo kuti tikwanise kuiburitsa gare gare papuratifomu yevhidhiyo inoshandiswa pasi rese: YouTube. Sarudzo nemikana iyo PowerPoint inotipa ingangoita isingagumi, nechikonzero chave chiri mumusika kwemakore mazhinji chiri chakanakisa chikuva chekugadzira mharidzo, senge Microsoft Word kana Excel muminda yavo.
2 Google Slides, iyo imwe nzira yeGoogle
3 Prezi, imwe yeakanakisa online dzimwe nzira
4 Ludus, gadzira mharidzo dzine hupenyu nenzira yakapusa
5 Canva, chii chakanyanya kudikanwa
6 Rova zvakasimba, chinja mharidzo kuita hurukuro
7 Slidebean, yezvinhu zvekongiri
8 Zoho, yakafuridzirwa nePowerPoint
9 Yakanakisa nzira kune PowerPoint?
Isu tinotanga uku kupatsanurwa ne yemahara imwe nzira kuApple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi zvese desktop desktop, macOS, uye chikuva chemafoni nhare, iOS. Kwemamwe makore ikozvino, Apple yakapa iyo Keynote application kune vese vashandisi vane ID muApple mahara, kuwedzera kune mamwe ese mafomu ari chikamu cheWork, kunyangwe kana vasina chero chinogadzirwa chakagadzirwa neApple, kubvira kuburikidza neICloud.com inogona kuita ese masevhisi ayo aanotipa isu, kusanganisira Keynote, Mapeji uye Nhamba.
Kunyange chiri chokwadi icho nhamba huru yesarudzo isipo Kugona kugadzirisa chero diki diki, parizvino ndiyo imwe yemahara emahara uye akabhadharwa dzimwe nzira dzinowanikwa pamusika. Uye zvakare, Apple inowanzo gadziridza iyo application ichiwedzera mashandiro matsva uye maturusi anotibvumidza kuti tiwedzere kugadzirisa mharidzo dzedu pamwe nekuwedzera kuenderana kukuru nemafaira nemafomati.
Google Slides, iyo imwe nzira yeGoogle
Imwe huru yakasununguka imwe nzira inowanikwa mune yepamhepo hofisi suite iyo Google inotipa iyo inonzi Slides. Slides ndeye cloud-based application Kubudikidza nayo isu tinokwanisa kugadzira mharidzo dzedu, dzimwe mharidzo dzekutanga pasina akawanda mafiringi, nekuti zvinotambura nekushomeka kwesarudzo dzakawanda. Kana tichifanirwa kuita hurukuro pamwe chete, sevhisi iyi ndeimwe yeakanakisa atinogona kuwana mumusika, sezvo ichitipawo chat kuitira kuti munhu wese ari chikamu cheprojekti agone kubatana uye kutaura munguva chaiyo.
Kuva revatema mukati Google ecosystem, isu tinowana mukana wakananga wemifananidzo iyo yatakachengeta muGoogle Mifananidzo kuti tikwanise kuisanganisira iyo chaiyo muhurukuro pasina kuisungira chero nguva kuGoogle gore kuti iisanganise. Zvese zviratidziro zvinochengetwa muakaundi yedu yeGoogle Drive, iyo inotipa, pamwe neGmail neGoogle Mifananidzo, inosvika 15 GB yekuchengetera mahara zvachose. Google Slides iri mukati meGoogle Drayivu uye gadzira mharidzo neGoogle Slides, isu tinongofanira tinya paNew kusarudza rudzi rwefaira ratinoda kugadzira.
Prezi, imwe yeakanakisa online dzimwe nzira
Sezvo mharidzo dzePowerPoint dzakatanga kubata, Prezi yakatanga kuve, pane zvayakanakira, imwe yeiyo dzimwe nzira dzakanakisisa dzinowanikwa mumusika, nanhasi nanhasi. Kutenda kuna Prezi tinogona kugadzira mharidzo dzinesimba kuburikidza nemisoro dzakasiyana idzo ipuratifomu inotipa, madingindira atinogona kuwedzera huwandu hwezvimwe zvinhu zvatinoda.
Nekuda kweshanduko ine simba, pachinzvimbo chekutaridzika kunge tiri kuona slidei, inotipa moyo wekuti tiri kuona vhidhiyo diki uko kunyangwe iyo nyaya inosemesa inogona kunakidza. Kana iwe ukaronga kushandisa zvishomana zveichi sevhisi, Prezi akasununguka zvachose kana iwe usina dambudziko nekuratidzwa kuri kuwanikwa kune wese munhu. Kana, kune rimwe divi, iwe usiri kuda kugovera zvako zvisikwa, iwe unofanirwa kuenda kunotora uye utore imwe yeakasiyana marongero emwedzi anopiwa neiyi chikuva.
Ludus, gadzira mharidzo dzine hupenyu nenzira yakapusa
Ludus, saPrezi, ndeimwe yewebhu masevhisi ayo mumakore achangopfuura atora chikamu chikuru chevashandisi vanofanirwa kugadzira chero mhando yemharidzo. Kana tichida gadzira mharidzo dzinotaridzika senge vhidhiyo pane kuratidza Ludus ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Muvhidhiyo iri pamusoro iwe unogona kuona dzese sarudzo dzainotipa uye zvese zvatingaite neiri rakanaka basa.
Imwe yemabhenefiti akakosha ayo aanotipa tichienzanisa nemamwe masevhisi akadai saPezi, iri kusangana pamwe neYouTube, Giphy, SoundCloud, Google Mepu, Facebook, Instagram ... iyo inotibvumidza isu kukurumidza kuwedzera chero zvemukati kubva aya mapuratifomu nekukurumidza uye nyore. Nekuda kwekubatanidzwa uye kuenderana nemafaira ari eGIF fomati, tinogona kugadzira mafirimu madiki pane mharidzo.
Iyo yemahara vhezheni yeLudus inotibvumidza isu gadzira inosvika makumi maviri mharidzo, chengetedza kusvika 20GB uye mukana wekukwanisa kuendesa kunze iwo masiraidhi ku PDF fomati. Asi kana tichida chimwe chinhu zvakare, isu tichafanirwa kuenda kubhokisi uye tosarudza chirongwa chePro, chirongwa chinotibvumidza kuti tigadzire nhamba dzisingagumi dzemharidzo, mharidzo dzatinogona kuchengeta mu10 GB yenzvimbo iyo yainotipa. , mukana wekudhawunirodha mharidzo yekuchiratidzira pasina Indaneti pamwe nekutibvumira kuchengetedza mharidzo ne password.
Canva, chii chakanyanya kudikanwa
Kana izvo zvatiri kutsvaga chiri a Zvakareruka, hapana-frills imwe nzira yePowerPoint, uye vese Prezi naLudus vakanyanya kukura kwatiri, Canva inogona kunge iri imwe nzira yauri kutsvaga. Canva inotipa nhamba hombe yemifananidzo, kuwedzera kune mharidzo zvachose mahara, tichidzivirira kuti isu tinofanirwa kuramba tichitsvaga Google yezvifananidzo kuti tigadzire mharidzo. Kuvhiya kwacho kuri nyore, nekuti isu tinongofanirwa kusarudza zvinhu zvatinoda kuwedzera nekuzvizvuzvurudzira kunzvimbo yatinoda kuti vave nayo muhurukuro.
Zvinotitenderawo shanda mumapoka, inotipa mukana wekupfuura anopfuura zviuru zvisere matemplate uye 8.000 GB yekuchengetedza mune yemahara vhezheni. Kana isu tikasarudza iyo Pro vhezheni, iyo yakatengwa pamadhora 1 pamwedzi, isu tichavawo nekugona kune anopfuura mazana mana emazana emifananidzo uye matemplate, tinogona kushandisa tsika mafonti, kuronga mapikicha uye mharidzo mumafolda, kutumira kunze zvigadzirwa seGIFs kuwedzera kune kukwanisa kuishandisa zvakare kune dzimwe mharidzo ...
Rova zvakasimba, chinja mharidzo kuita hurukuro
Dzimwe nguva isu tinomanikidzwa kuumba mharidzo izvo haufanire kuratidza ruzivo rwekuonaPane kudaro, ndezve kupa ruzivo nekupa dzakasiyana sarudzo, uye zvinoenderana neyatinosarudza, rumwe ruzivo kana rumwe ruchaonekwa. Mune ino kesi, Rova zvakasimba Iyo ndeimwe yesarudzo dzakanakisisa pamusika. Uye zvakare, sezvo yakagadzirirwa izvi chinangwa, tinogona kuwedzera zvinyorwa zvehurefu hwakasiyana nekuda kwekuenderana kweMarkdown.
Iyo yemahara vhezheni inotibvumidza isu shandira pane nhamba isingaverengeki yemharidzo, gadzira mharidzo dzakavanzika uye utumire mhedzisiro muPDF fomati. Kana isu tichida kuwedzera manhamba, kuchengetedzwa kwepassword, kuteedzera kunongedzera, rutsigiro uye zvimwe zvakawanda, isu tinofanirwa kutarisa kubva ku15 euros pamwedzi.
Slidebean, yezvinhu zvekongiri
Kana isu takamanikidzwa kuita gadzira imwe mhando yemharidzo, kungave kuburitsa chigadzirwa, rondedzera mhedzisiro yekota, nezve chirongwa, kana chero imwe mamiriro ezvinhu anoda akateedzana ematemplate akagadzwa, Slidebean Iyo ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo pamusika. Kuburikidza neSlidebean isu tinongofanirwa kusarudza mhando ye template yatiri kutsvaga uye kutsiva dhata rayo neyedu. Zvakareruka sekudaro.
Slidesbean haina kugadzirirwa kugadzirisa chinongedzo, kana kuwedzera kana kubvisa zvirimo, asi ku fambisa zvakanyanya sezvinobvira zvisikwa kumushandisi, kuitira kuti iwe ugo tarisa pane izvo zvakakosha uye mune isingasvike maminetsi mashanu iwe unogona kuti mharidzo igadzirire. Kusiyana nemamwe masevhisi, maSlidebean haatipe chirongwa chemahara chekuyedza mashandiro acho, asi zvisinei nechirongwa chatasarudza, tine nguva yekuyedza kuti tione kana ichienderana nezvatinoda.
Zoho, yakafuridzirwa nePowerPoint
Kana iwe uine yakashandiswa kuPowerPoint uye haunzwi sekuda kutanga kudzidza mashandisiro amamwe masevhisi epamhepo kana maapplication ekugadzira mharidzo, Zoho Ratidza Ndicho chinhu chepedyo kwazvo kuPowerPoint chatichawana, sezvo chimiro chayo pamwe nenhamba yesarudzo, zvirinani zvakanyanya, zvakafanana neizvo zvatinogona kuwana mukushandisa kweMicrosoft. Kuwedzera mifananidzo, zvinyorwa zvemavara, miseve, mitsara… zvese zviri nyore kugadzira neZoho Show.
Nezve huwandu hwema templates atinawo, ishoma kwazvo, kwete kutaura zviripo, asi kana fungidziro yako iri chinhu chako uye usina dambudziko rekubata nesiraidhi isina chinhu, unogona kunge wakazowana iko kunyorera kwaunoda kuti ugadzire mharidzo dzako dzakajairika.
Yakanakisa nzira kune PowerPoint?
Tingaone sei yega yega yewebhu masevhisi / mafomu atakakuratidza mune ino chinyorwa ivo vanotarisana kune akasiyana magumo, saka kana chinhu chedu ndechekugadzira mharidzo dzinoyevedza, sarudzo yakanakisa ndeyeLudus, nepo kana tichida kugadzira mharidzo tichishandisa matemplate, Slidebean yakanaka. Zvese zvinoenderana nezvatinoda, saka unofanirwa kuve wakajeka nezvazvo usati wahaya sevhisi uye wotanga kuzvijaira nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tutorials » Dzakanakisa dzimwe nzira dzePowerPoint
Google Drive debuts dhizaini nyowani
Kutenda kuzivikanwa kwechiso muIndia ivo vakwanisa kuwana vangangoita zviuru zvitatu zvevana vakarasika mumazuva mana